Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguKyle
Ungajongi ngaphaya kweCozy Corner Studio. Indawo yokulala entsha yeStudio iVilla ebekwe kwiChalk Sound enemibono emihle yeSilly Creek. Le villa iqhayisa ngefanitshala yale mihla kunye nezinto eziluncedo zondwendwe lwethu kumda wamanzi kunye neebhodi zokubheqa kumntu othanda ukuzonwabisa. Yimizuzu yokoqobo ukusuka eTaylor Bay naseSapodilla Bay Beach kwabo bathanda ulwandle kunye nemizuzu eli-15 ngemoto ukuya eGracebay Beach eyaziwayo kwihlabathi.
I-Studio Suite, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo elinokufikelela ngokuthe ngqo echibini apho ungahlala khona emini nangokuhlwa kwaye wonwabele ukutshona kwelanga okuhle kumngangatho phezu kwamanzi omlambo asileyo. Uluhlu lweendawo zokuphumla zangaphandle ezibandakanya i-beach cove yokungena emanzini kunye nokusungula ii-kayak kunye neebhodi zokubheqa.
I-Chalk Sound yindawo yokuhlala ekhethekileyo kwaye intle. Ikhuseleke kakhulu kwaye ikhuselekile ngesikhululo samapolisa kwikona yokungena. Ukufikelela kokubini kulwandle lwaseTaylor Bay kunye nolwandle lwaseSapodilla Bay phakathi koluntu kunye nendawo yokutyela eyintandokazi yaseLas Brisas.